फष्ट रेञ्जर बटालियनका कर्नेलको शोषण -3ghumti
फष्ट रेञ्जर बटालियनका कर्नेलको शोषण
भाद्र २८, २०७८ सोमवार १४:२० बजे
हिजोका दिनसम्म भनिन्थ्यो हाम्रो सरहरु साह्रै इमान्दार र हामीलाई सोच्ने र माया गर्ने हुनुहुन्छ तर विडम्वना भनौ त्यो अब रहेन् । यहाँ हामी हरेक जवानबिच खासखुस हुन्छ तर नजाने जस्तो थाहा नपाए जस्तो गरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । पदिक सरहरु पनि थाहा नपाएजस्तो गरिदिनुहुन्छ तर मुखामुख गरेर कुरा काटिरहेको चाहिं सुनिरहन्छौं । पदिक सापहरुलाई त बोल्ने छुट छैन र अधिकृतसाबहरु पनि खोइ के खोइ के जस्ता ।
दुईतीन जनाले मिलिभगत गरेर गण डुबाए । यिनलाई चाहिँ किन पोष्टिङ पनि नगरी राखेको भनेको त मिलाएर खान राखे जस्तो देखिन्छ । विगत डेढ बर्षमा गण साह्रै नराम्ररी बिग्रेको छ । कर्साब कमाउने भन्दा अरु नसोच्ने । गणको सम्पत्ति सीमिति मान्छेहरुलाई फकाइ अनि मिलिभगतमा विशेषगरी प्र.सु. र एक दुई जना अधिकृत र पदिक रेजिमेन्टको पनि पति हुँदा सवै कल्याणकारी कोष मनलाग्दी तरिकाले सिध्याए ।
बनावटी कागजमा बोर्ड बसेको देखाउने तर गणको जवानको भविष्यभन्दा आफ्नै दुनो सोझाउँदै आउने गरेका छन् कर्साबले । कर्साब म्याडमको पनि राज छ, के हो यस्तो । छाउनीमा छँद विभिन्न कारण देखाई कोषको रकम दुरुपयोग गरेका, भुकम्पमा ढलेका घरका इटा र काठ लगेर लकाउने जस्ता काम गरेका छन् । त्यसैकारण अहिले हामी अप्ठेरोमा परेका छौं ।
छाउनीको पिच ! मन्दिर गेटको बगैंचा पोखरी कसरी बन्यो, त्यसको लेखाजोखा छैन । कि हुनुपर्दैन । हाम्रो पसिना र ढाड मात्र सेक्ने हो ? सीसीएमसीमा त्यत्रो रासनको आम्दानी भयो भन्ने सुनिन्छ, खै कता गयो ? हाम्रो गुनासो सुनियोस् र छानबिन होस । हाकिमको तथास्तुमा मिलिभगत गर्ने, सबैले मिलाएर खाने गरेक छन् ।
हामी फस्ट रेञ्जर बटालियनका सोझा सकलदर्जालाई यस्तो अन्याय पहिला पनि भएको सनेको थियौं र अहिले पनि उस्तै छ । चीफसाब हामीले देख्ने पद्दति र प्रणाली यही हो ? – धेरै समयदेखीका पिडित फष्ट रेञ्जर बटालियनका सकलदर्जाहरु, हाल पोखरा(साँघु साप्ताहिकमा खबर छ)
# फष्ट रेञ्जर बटालियन
कटुवा पेस्तोल र गोली सहित १ जना पक्राउ र गोली सहित १ जना पक्राउ